रिलिज होलान् ‘चिसो मान्छेदेखि कबड्डी ४’ ? – MB Khabar
निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले चलचित्र ‘चिसो मान्छे’को प्रदर्शन मिति तय गरेर छायांकन सुरु गरे । चलचित्रको छायांकन हुँदै गर्दा कोरोनाको कहर निकै कम भएको थियो । यसैले पनि उनी भदौ ११ गतेबाट चलचित्र रिलिज हुनेमा ढुक्क थिए ।
चलचित्रको छायांकन सकेर जुम्लाबाट फर्किएको केही समयमै नेपालका कोरोना ह्वात्तै बढ्यो ।कोरोनाको दोश्रो लहरले जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । दीपेन्द्र यतिबेला घरमै छन् । उनी भन्छन्–‘अब, त भदौ ११ मा चलचित्र रिलिज गर्न कसरी सकिएला र ? चलचित्रको काम त सकिन्छ । तर, माहोल नै नबनेसम्म त चलचित्र रिलिज गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अब त चलचित्र कहिले रिलिज हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नै छैन ।’कोरोनाको पहिलो लहरले भन्दा दोश्रो लहरले पारेको असर निकै ठूलो छ । मानिसमा त्रास बढेको छ । यसैले, आम नेपालीले खोप नलगाएसम्म हलमा दर्शक फर्किने अवस्था छैन । दीपेन्द्र भन्छन्–‘अरु, क्षेत्र खुलेपनि हाम्रो क्षेत्र खुलिहाल्दैन । मनोरञ्जन क्षेत्र सबैभन्दा ढिलो खुल्ने क्षेत्र हो । यसैले, पनि चलचित्र क्षेत्र नै अब कसरी बढ्छ भन्न सकिदैन ।’ दीपेन्द्रले मात्र होइन, अन्य केही निर्माताले पनि चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरेर छायांकन सुरु गरेका थिए । अब, ती चलचित्र पनि रिलिज हुन्छन् या हुँदैनन् टुंगो छैन ।
साउन १ गतेलाई तय गरिएको ‘डिसेम्बर फल्स’, भदौ १८ लाई तय गरिएको ‘ए मेरो हजुर ४’, असोज १ गतेलाई तय गरिएको ‘चुरिफुरी’को छायांकनको काम त सकिएको छ । तर, चलचित्र रिलिज हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । चलचित्र ‘कबड्डी ४’का निर्माताले असोज १५ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेर छायांकन सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, यो चलचित्रको छायांकन नै सुरु हुन पाएन । अब, चलचित्रको छायांकन कहिले सुरु हुन्छ पक्का छैन । यस्तो अवस्थामा तोकिएको मितिमा यो चलचित्र रिलिज हुने संभावना पनि कम छ । कोरोनाको पहिलो लहर आउनु अघि प्रदर्शन मिति तोकिएका दर्जन बढी चलचित्र पनि रिलिजको पालो पर्खिरहका छन् । सबैभन्दा ठूलो मारमा ती चलचित्रका निर्माता छन् । ‘म यस्तो गीत गाउँछु २, लक्का जवान, निरफूल, चपली हाइट ३, प्रेमगीत ३, हिजो आजका कुरा, संझना विर्सना’ लगायतका चलचित्र यो सूचीमा पर्छन् । यस्तै, कोरोनाको दोश्रो लहरका कारण रिलिज हुन नपाएका ‘कृष्णलीला, मनसँग मन, लप्पन छप्पन २’ पनि अब कहिले रिलिज हुन्छन् यसै भन्न सकिदैन ।
‘समर लभ’ फूलपातीबाट रिलिज हुने
उत्कृष्ट १६ को भिडन्तमा अब ‘दोहोरी च्याम्पियन’